Home > အားကစားအရင်းအမြစ်အခြေအနေများ စိစစ်လေ့လာခြင်းဆိုင်ရာ သုတေသန ပြုလုပ်နိုင်ရေးအတွက် Proforma နှင့် Focus Group Discussion သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပ
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား၀န်ကြီးဌာန၊ အားကစားနှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာန အားကစားစီမံကိန်းနှင့် သုတေသနဌာနခွဲမှ ပြုလုပ်ကျင်းပသည့် ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ အားကစားအရင်းအမြစ် အခြေအနေများအား စိစစ်လေ့လာခြင်းဆိုင်ရာ သုတေသန ပြုလုပ်နိုင်ရေးအတွက် Proforma နှင့် Focus Group Discussion သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက် (၉)နာရီက ရန်ကုန်မြို့ အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ(ရန်ကုန်) သင်တန်းခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ အားကစားနှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမျိုးလှိုင်၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား၀န်ကြီးဌာန ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်း၀န် ဦးမြသန်းထိုက်၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့် တာ၀န်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ သင်တန်းနည်းပြဆရာများနှင့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်များမှ အားကစားအရာရှိများတက်ရောက်ကြသည်။
ရှေးဦးစွာ မြန်မာနိုင်ငံအိုလံပစ်ကော်မတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး အားကစားနှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမျိုးလှိုင်က သုတေသနလုပ်ငန်းဟာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၊ ဒေသတစ်ခု၊ ဌာနတစ်ခု တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ဖြစ်တာကြောင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား၀န်ကြီးဌာန အနေဖြင့် ၀န်ကြီးဌာန လက်အောက်မှာရှိတဲ့ ဦးစီးဌာနအလိုက် သုတေသနလုပ်ငန်းများကို အရှိန်အဟုန်နဲ့ ဆောင်ရွက် လာနိုင်အောင် ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်မှုများ လုပ်ဆောင် နေပါကြောင်း၊ ဒီသင်တန်းဟာ ဒုတိယအကြိမ် ဖွင့်လှစ်တာဖြစ်ပြီး တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များ၏ အားကစားပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပပေးနိုင်မှု၊ ပြည်သူများပါ၀င်လာမှုနှင့် အားကစားအရင်းအမြစ်အခြေအနေများအား စိစစ်လေ့လာနိုင်ရေး တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များမှ သင်တန်းသားများအနေဖြင့် Proforma အချက်အလက် Data များ ဖြည့်သွင်းရာတွင် မိမိတိုင်း၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်များမှ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ ပြိုင်ပွဲအခြေအနေ အားကစားကွင်း/ရုံအခြေအနေ၊ အားကစားနည်းပြများနှင့် အားကစားစီမံခန့်ခွဲမှုအခြေအနေ၊ အားကစားပစ္စည်း ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှု အခြေအနေများကို မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြင့် စနစ်တကျ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပြုစုတင်ပြနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါကြောင်း၊ တဆက်တည်း မှာကြားလိုတာကတော့ သုတေသနအဖွဲ့၀င်များမှ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များကို အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးခြင်း၊ (Focus Group Discussion) ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများကို အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် သင်တန်းမှပို့ချလိုက်သည့် အချက်အလက်များကို ဂရုစိုက်လေ့လာမှတ်သားပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားဖို့ မှာကြားလိုကြောင်းဖြင့် ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆက်လက်ပြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ သင်တန်းနည်းပြဆရာ/ဆရာမများဖြစ်သည့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား၀န်ကြီးဌာန အကြံပေးအရာရှိ ဒေါက်တာရဲတင့်လွင်နှင့် ဆေးသုတေသနဌာနမှ သုတေသနအရာရှိ ဒေါက်တာကျော်မင်းထွန်း၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာမျိုးမျိုးမွန်တို့အား အမှတ်တရ လက်ဆောင်များ ပေးအပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါသင်တန်းကို (၂၉.၇.၂၀၁၉)ရက်နေ့ တစ်ရက်တည်းသာ ဖွင့်လှစ်တာဖြစ်ပြီး သင်တန်းသို့ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များမှ သင်တန်းသား(၃၀)ဦး၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဌာနခွဲ မှ (၃)ဦးနှင့် အားကစားစီမံကိန်းနှင့် သုတေသနဌာနခွဲမှ (၇)ဦး၊ စုစုပေါင်းသင်တန်းသား(၄၀)ဦးတို့အား သင်တန်းနည်းပြဆရာများက သုတေသနပြုလုပ်ရမည့် ရည်ရွယ်ချက်နှင့်လုပ်ဆောင် မည့်အစီအစဉ်များအားလည်းကောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များသို့ သုတေသနဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍လည်းကောင်း၊ သုတေသနအဆိုပြုလွှာ Proposal တင်ပြ ဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ Overview of data Collection ? Filling the data Collection Forms ? Conducting focus Group Discussion ? Guideline for focus Group Discussion ? Plan for Field data Collection and Discussion များ နှင့် ပတ်သက်သည့် သုတေသနလုပ်ငန်းစဉ်များ ဆွေးနွေးသင်ကြား ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Source URL: http://spedmyanmar.com/content/%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%B1%E1%80%A1%E1%80%94%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8-%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%B1%E1%80%B7%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%AC-%E1%80%9E%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%94-%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%BD%E1%80%80%E1%80%BA-proforma